Ukumaketha Nge-imeyili Izinombolo | Martech Zone
Ukumaketha Nge-imeyili Izinombolo
NgoMgqibelo, ngoMashi 10, 2007 NgoMgqibelo, Okthoba 20, 2018 Douglas Karr
Umngane wami omuhle, UChris Baggott, usezokhipha incwadi yakhe yokuqala, i-Email Marketing By the Numbers. UChris ubhale incwadi nge Ali Sales, omunye umngani wami.
UChris ungumlingani owasungula ku- I-ExactTarget, inkampani engisebenza kuyo njengeMenenja yoMkhiqizo. Ibhulogi kaChris (kanye nabanye abaholi nabasebenzi abahle kakhulu) bacindezele i-ExactTarget ku-stratosphere - yaqamba enye yezinkampani ze-Inc ezikhula ngesivinini esikhulu ku-500 ezweni.
Akukhona nje kuphela ukuthi ngibe nentokozo yokusebenza noChris e-ExactTarget, ngiphinde ngiqale encwadini yakhe - ngikhuluma nge-automation nokuhlanganiswa. Ngibheke phambili ekufundeni le ncwadi kanye nenjabulo yokuzibona ngiphrintiwe! Ngibhalele futhi ngaba semagazini, kodwa angikaze ngibe nencwadi. Kungicindezele kakhulu ukuthi ngiqale ukuzibhala, nginamakhasi angaba ngu-75 kulokho engikufundile onyakeni wami wokuqala wokubhuloga. Ngidinga ukubuyela kuyo, noma kunjalo!
UChris uqala inkampani yakhe elandelayo, Isoftware yokuhlanganisa. Ngibe nenjabulo yokusebenza noChris kulokhu kuqalisa futhi - sichithe ubusuku obuningi sikhuluma nobunzima obubi bokubhuloga izixhumi zomsebenzisi nokungakwazi kwabafundi ukuthi bakwazi ukuthola okuqukethwe kalula. Uzobona i-Compendium ebalazweni maduze uzokwenza lokho nje! Angifuni ukukhipha okuningi esikhwameni esikuso, kepha ngijabule ukubona umbono kaChris ufezekiseka I-ExactTarget wenze. UChris usebenza ku-Compendium isikhathi esigcwele manje. Nginendodana ebheke ekolishi, ngakho-ke bekufanele ngikhethe indlela ephephile futhi nginamathele enkampanini esivele iqhuma!
Oda kusengaphambili ikhophi lakho lokumaketha nge-imeyili ngenombolo! I-imeyili iseyindlela engakholeki yobuchwepheshe enamathemba amaningi. Ngokungafani nobunye ubuchwepheshe, i-imeyili esuselwa kwimvume isengaphambili ekumaketheni kwe-'Push '. Okusho ukuthi, unginike imvume yokuxhumana nawe, futhi ngiyakwazi ukukucindezela lokho kuxhumana nawe lapho ngidinga ukukwenza. Ithelevishini, Umsakazo, Amaphephandaba, RSS kusenokuthembela okukhulu kukhasimende, kumakhasimende noma ekulungiseleleni 'ukungena ngaphakathi'. I-imeyili ikhule yaba yingxenye yempilo yansuku zonke kithi (angazi ukuthi ngenzeni ngaphambi kwe-imeyili!) Futhi ngizoqhubeka nokuhlala ngaleyondlela.
Angisakwazi ukulinda ukuthola ikhophi yencwadi! Futhi kungcono ukuthi ubhalwe phansi, Chris!
Tags: chris bagottimeyili Marketingibhuku lokumaketha i-imeyiliukumaketha nge-imeyili ngezinombolo
I-SOAP'd: Skrola Uhlelo Olunye
Mar 26, 2007 ku-2: 17 PM
Ngithole isiza sakho ngokubheka le ncwadi; ) Kubukeka sengathi kungakufanele ukuphuma.
Mar 26, 2007 ku-6: 15 PM
Ngithemba kanjalo! UChris ungumfana omkhulu futhi unguMvangeli we-imeyili othumele amandla e-imeyili emhlabeni wonke kule minyaka engu-5 edlule. Izeluleko zakhe ziyafakazelwa futhi zibheke phambili. I-imeyili ibukwa kancane njengobuchwepheshe “bezolo” kodwa akunjalo. Abathengisi bathola ukuhlanganiswa kwe-imeyili, amakhasi okufika, okuthunyelwa okubangelwa, njll. Bashayela ithrafikhi eningi kakhulu nemali engenayo kumasayithi abo.
Ngo-Apr 11, i-2007 ku-2: i-10 PM
Ngiyavuma. Ungalokothi ubukele phansi amandla we-imeyili ebekwe kahle kokukhetha kabili ohlwini lwababhalisile.
Ngo-Apr 27, i-2007 ku-8: 49 AM
Yincwadi enhle futhi i-buzz isiqalile ukuyizungeza kumbuthano wethu e-Atlanta. UDoug, kuhle ukuthola ibhulogi yakho futhi ukufisela okuhle, Chris kanye nabaholi abacabangayo ku-Exact Target and Compendium. Buyela emuva e-Atlanta futhi ube ne-steak nami ngesinye isikhathi! UScott
Ngo-Apr 27, i-2007 ku-9: 20 AM
Kuhle ukuzwa kuwe futhi ngijabule ukuthi ungitholile! Ngibheke phambili ukuhlangana nawe futhi maduze.
Okwabantu abangazi: Incazelo6 ungomunye wamaphayona obuchwepheshe obusetshenziswayo kwezokuMaketha. Ukube bekunenkampani eyodwa engike ngasebenza nayo eyaqondwa ukukhangisa okuphakathi naphakathi, i-automation, kanye nekhono lokusebenzisa amandla enkampani ngayinye, kuchazwa6.
UScott nethimba bangabaholi abacabanga ngokuphelele embonini. Ngibe nenjabulo yokuya esidlweni sakusihlwa noMichael Kogon (CEO) noScott ngobunye ubusuku futhi bekuwukuphefumula komoya omusha. Ngiphume ngendiza e-Atlanta nge-buzz, ngiphila ngemibono futhi ngijabule ukubuyela ekuthuthukiseni umkhiqizo wethu.
IMicrosoft ibone Incazelo6 kaninginingi ngobuhlakani nobuchwepheshe babo. Iqembu elimangalisayo! Uma sibheka ku-'Agency of the future ', ngicabanga ukuthi i-Definition6 isivele iyisibonelo esihle!
Siyabonga ngokuma ungazise ukuthi ubulapha, Scott!